Unamathele ekhaya ngalezi zikhathi ezingaqinisekile? Ngaso sonke isikhathi ubufuna ukungena ezithombeni? Ungabe usaya phambili ngoba izithombe ezizimele impendulo yakho kuyo yonke imibuzo yakho. Ukuthwebula isithombe sakho kudinga wena nekhamera kuphela, futhi uma kwenziwa kahle, kungenza okunye okuthunyelwe ku-Instagram kufanelekile ukuze kuphakanyiswe okuphakelayo kwakho. Nayi eminye imibono yokuqalisa!
Dala ikhava ye-albhamu oyithandayo
Amakhava e-albhamu ziwumthombo omkhulu wokhuthazo. Kusuka ku-indie ethambile kuye kwi-rap enamandla, amakhava e-albhamu ahlinzeka ngezimo ezahlukahlukene ongakhetha kuzo. Ngaphezu kwalokho, izembozo zama-albhamu eziningi zithwetshulwa kuma-studio okwenza kube lula ukudubula ngaphakathi kwekhaya lakho.
Yenza I-3D Yakho Yokuzivikela
Usebenzisa uhlelo lokusebenza lwesithombe se-3D njenge I-LucidPix, ungaguqula isithombe sakho sibe yi-3D, akudingeki amakhamera akhethekile! Izithombe ze-3D zengeza ukujula esithombeni sakho, ukuze uthole ubuciko bangempela ngamashothi wakho. Thatha noma yimuphi umbono ovela phezulu uwenze ube yi-3D futhi uzitholele isithombe esisha sha! Ngokwenza isithombe sakho sibe yi-3D ungakhulisa imizwa yesithombe sakho bese usisa esimeni esisha ngokuphelele.
Letha ngaphandle endlini
Lesi esenzelwe wonke amafayili we- abathanda izitshalo phandle lapho. Manje izingane zakho zezitshalo zingangena esithombeni futhi! Uma unezitshalo zasendlini ezilele nxazonke, zihlele phambi kwangemuva bese ubona ukuthi ungakuthola yini ilanga ekudutshulweni kwakho. Lokhu kwenza kube nokuthula okukhulu.
Phinda wenze ikhava kamagazini
Amakhava kamagazini ungomunye umthombo omuhle wokukhuthazwa. Omagazini bemfashini abanjengoVogue baziwa ngamakhava abo abamba ukunaka, ngakho-ke nakanjani ungathola ugqozi kubo. Ukusuka kuma-in-studio shootots kuya ngaphandle okukhulu, omagazini bakusizile.
Sebenzisa i-Paint ku-Self Portrait yakho
I-Paint iyithuluzi elinamandla uma isetshenziswe kahle. Ingatshela izindaba zonke futhi idlulise imizwa. Ungayifaka emzimbeni wakho, uyisebenzisele ukupenda okwasemuva, nezinye izinto eziningi. Kukhona nezinhlobo eziningi zepende ongazama ngazo ukuthanda upende omnyama futhi upende we-neon. Isibhakabhaka umkhawulo!
Isiphakamiso esithandekayo sokusebenzisana nezibuko. Ngenkathi ngokwesiko ubuzoshutha isithombe sakho esibukweni, kufanele uziphonsele inselelo ngokusebenzisa izibuko ngezinye izindlela. Sebenzisa izibuko eziningi ukudala umphumela we-kaleidoscope. Izibuko eziphukile noma izibuko zesibuko ukuze uzizwe ukhululekile. Izibuko zingangeza into eyimfihlo esithombeni sakho, ngakho-ke ungesabi ukuyisebenzisa!
Lo mbono uzosetshenziswa ekukhiqizweni ngemuva, hhayi esitudiyo. Hlela izingxenye eziyisisekelo zesithombe sakho njengokuvezwa nombala, bese ukuyisa ku- uhlelo lokusebenza oluthandayo lwe-illustrator bese uqala ukwengeza imifanekiso! Ungadweba kuso, noma uthathe ezinye izithombe ze-vector online bese uyifaka esithombeni. Ingangeza into edlalayo ku-portrait yakho noma ngisho enkulu, kuya ngemidwebo oyisebenzisayo.
Ukuthi unamathele estudiyo akusho ukuthi kufanele unamathele kuzizinda zakho ezisobala! Yenza ubuciko ngamahlumela akho asendlini bese usebenzisa imibono yethu engenhla ukuthola ugqozi. Ungakhohlwa ukuzijabulisa ngesikhathi samahlumela akho!
Amathiphu Wezithombe Zokuqina →← Izinto ezi-4 Zokuzigcina engqondweni Lapho Wenza Imfashini Izithombe